WQ. Maxamud M. Culusow Feb. 28, 2010
Heshiiska ay Ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca (ASWJ) iyo Dowladda Federaalka KMG (DFKMG) ku gaareen Magaalada Addis Ababa, Ethiopia horraanta Bisha Maarso 2010 waa amar ka soo baxay Dowladda Ethiopia oo ah dal ay DFKMG iyo ASWJ ku tiirsan yihiin. Duruufta ka taagan Soomaliya ayaa dad ujeedo gaar ah leh ku qancisay in Ethiopia tahay Taliyaha Guud ee Soomaliya halka ay Ethiopia iyo Soomaliya kala yihiin labo dal oo daris ah oo ay ka dhexeyso maslaxad, tartan iyo farqi. Talada Soomaliya waxay gashay gacanta Ethiopia ka dib markii Soomaliya ay noqotay dal aysan ka jirin dowlad rasmi ah, una qaybsantay Somaliland, Puntland, ASWJ, DFKMG, Al Shabab, Hizbul Islam (HI), isla markaana ay soo baxeen Shakhsiyaad diyaar u ah inay dhaxal guuriyaan Ummadda Soomaliyeed aragtidooda shakhsi darteed. Soomaliya waxay qarka u saaran tahay in lagu daro Ethiopia sida ku dhacday Soomali Galbeed (Kililka 5) iyo Eritrea 50 sano ka hor, haddii aysan Soomalidu la iman talo wadajir ah inta ka horreysa 1da Lulyo 2010.
Tahlukadaas waxaa marmarsiiyo xooggan siinaya talaxumada iyo xadgudubyada ka baxsan Maslaxadda Ummadda Soomaaliyeed oo Al Shabab iyo Hizbul Islaam la soo shaac baxeen, ka dibna dhiirrigeliyay dano isku dhafan ee shisheeye oo ay adag tahay si loo fahmo, loogana guuleysto. Ujeedooyinka muuqda ee heshiiska waxaa ka mid ah:
In la fuliyo go’aanka shirkii IGAD ee 30kii Jennaayo 2010.
In la aqoonsado, loogana mahadceliyo Dowladda Federaalka Ethiopia dadaalkeeda joogtada ah ee ay ugu jirto “Nabad” ka dhalinta Soomaaliya.
In xalka iyo maareynta talada iyo siyaasadda Soomaaliya looga dambeeyo Dowladda Ethiopia.
In laga dhex abuuro kooxaha Soomaalida khilaaf muujya damiir la’aan iyo garasho-xumo.
In la abuuro dareen ah in Beesha Caalamka iyo Ethiopia ay qaadeen taallaabo wax looga qabanayo dhibaatada Soomaaliya si indhaha looga jeediyo barakaca iyo burburka ka dhashay fulinta Istratejiyada lagu dhaqaaqay laga soo bilaabo 2005.
In beesha caalamku toos u taagerto ASWJ.
Tiro xilal Wasiirro iyo Saraakiil ah ayaa loo qoondeyay ASWJ. Lama yaqaan tirada Golaha Wasiirrada iyo Saraakiisha Dowladda ee la qaybsaday. Golaha Wasiirrada hadda dhisan wuxuu ka kooban yahay 39 Wasaaradood. Xubnaha ASWJ uga mid noqonaya Golaha Wasiirrada waxaa lagu xulaya hab beeled, waxayna u hoggansami doonan Axdiga KMG ayagoo matalaya beelaha ay ka soo jeedaan. Jiritaanka ASWJ waxay ku eg tahay marka la qabto xafladda heshiiska inkastoo Dowladda Ethiopia ay mar hore ku boorisay Beesha Caalamka, DFKMG iyo ASWJ dhaqan-gelinta hesiiska. Wasaaradaha Dowladda waxaa loo qaybiyay darajooyin kala ah A,B, C, waxaana heshiisku tilmaamaya in muddo 30 maalmood ah lagu mideeyo DFKMG iyo ASWJ. Heshiisku ma qorayo shardi ah in Barlamaanka Dowladda Federaalka iyo Golaha Hoggaamiya ASWJ ansixiyaan ka hor dhaqan gelintiisa. Isla markaa, heshiisku ma qorayo in wax laga beddelo Axdiga KMG ah si loo qeexo kooxaha wadaagga ku ah DFKMG sida ARS-D, ASWJ, DFKMG-Abdullahi Yusuf iyo HI-M. Waxay su’aal ka taagan tahay in xubnaha Barlamaanka iyo Dowladda ka tirsan yihiin kuwo matalaya beelahooda ama ururrada ay xilalka ku qaateen.
Inkastoo ujeedooyinka heshiiska lagu sheegay in lagu xoojinayo kartida dowladda, Qaybta Af Soomaaliga ee Idaacadda Codka Mareykanka (ICM) waxay si qotadheer uga hadashay khilaaf aad u ba’an oo ka dhex taagan ASWJ ka dib markii wareysi lala yeeshay aqoonyahanno iyo dad xog ogaal lagu tilmaamay haseyeeshe aan intooda badan magacyadooda la shaacin. Sida darted, waxaa mugdi weyn ku jiraa sida ASWJ ay ICM tilmaantay ay u xoojin karto tayada DFKMG. Dhinaca kale, waxaa soo shaac baxaya in Dowladda Federaalka KMG ay aad uga welwelsan tahay heshiiska. Dowladda Ethiopia oo welwelkaas xog ogaal u ah, horeyna Madaxweyne Sheikh Sharif uga hadlay, waxay ku boorisay Madaxda DFKMG inay heshiis la galaan ASWJ. Ma cadda sababta Dowladda Federaalka uga welwelsan tahay heshiiskaas lagu xoojinayo wax qabadkeeda laguna ballaarinayo deegaannada ay magac ahaan uga taliso. Dowladda Ethiopia xiriir toos ah ayey la leedahay dhammaan kooxaha iskhilaafsan iyo maamul goboleedyada.
Aayaha Soomaaliya waxaa ku hardamaya ASWJ, DFKMG, AMISOM, Maamul Goboleedyo, Ethiopia, Al Shabab, Xizbul Islaam, Eritrea, Al Qaeda iyo Beesha Caalamka oo Dowladda Mareykanku hoggaamineyso. Kooxdaas waxaa dhex boodaya Soomali darajo iyo maal doon ah dariiqo kasta, Qurbajoog dhowr shaati gashan, Qabiilooyin iyo islaamiyiin is nacay, iyo Wakiillada deeq bixiyayaasha ee jooga Nairobi, Kenya. Shacabka Soomaaliyeed intiisa badan wuxuu taageray halgan ku saleysan difaaca diinta Islaamka(Jumlo ahaan), Madaxbannanida iyo Maslaxadda Ummadda Soomaliyeed, xorriyada qofka, sinnaanta xaqsoorka dadka iyo la dhaqanka bulshada caalamka ah, mana qabo inay taageereen gacan-ka-hadalka ka taagan xuska Nabigeenna Maxamed (SCW), burburinta Qabuuro iyo ka takooridda Soomaaliya Adduunka intiisa kale. Fikradda ah dhaqan-rog bulsho waxaa hadda ka hor ku dhaqaaqay kooxdii Khameruuj (Khmer Rouge) oo ka talineysay dalka Kamboodiya (Cambodia) 1975-1979 oo sababay xasuuq dad gaaraya ilaa 1.7 milyan oo u dhintay gaajo, cudurro, harraad iyo xabbad. Kambodiya waxaa ku nool Musliim Sunni ah oo dhibkaas ku dhacay.
Heshiiska dhexmaray ASWJ iyo DFKMG ah waa guul ay gaartay Ethiopia. Waxaan muran ku jirin in gacanta wax fulineysa iyo dadka iyo dalka la gumaadayo ay wada yihiin Soomali marka laga reebo dhibaatada Ethiopia iyo AMISOM ay geysteen ama geysanayaan si toos ah, hase yeeshe danta loo adeegayo waa mid shisheeye oo ujeedooyin kala duwan leh. Mustaqbalka Soomaliya waxaa iska leh oo wadaaga Muwaadiniinta Soomaliyeed oo laga doonayo inay si wadajir ah dhiigooda ugu difaacan Maslaxadda iyo mustaqbalka dadkooda iyo dalkooda. Soomaali dhexdeeda ka wada hadasha ayaa looga gudbi karaa hagardaamo shisheeye iyo khilaafyada gudaha. Maxamud M. Culusow
E_mail: mohamuduluso@gmail.com ________________________________________________________________ We welcome the submission of all articles for possible publication on WardheerNews.com So please email your article today Opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views of WardheerNews Maqaalkani wuxuu ka turjumayaa aragtida Qoraaga loomana fasiran karo tan WardheerNews Copyright � 2010 WardheerNews.com